အန်းဒရွိုက် APK ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက် Plex | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
အန်းဒရွိုက် APK ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက် Plex
အန်းဒရွိုက် APK ကိုများအတွက် Plex:
အန်းဒရွိုက် Plex Apk Cracked
Firestick များအတွက် Plex Apk
Plex Apk patch
Plex Android တီဗွီ
Plex Media ကိုဆာဗာက Android Apk
Plex ဥသုံသင့်မီဒီယာစာကြည့်တိုက်များစုစည်းနှင့်မည်သည့်ကိရိယာသူတို့ကိုလွှဲပြောင်း – အားလုံးကဗီဒီယိုအပါအဝင်, ဂီတ, နှင့်ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်. တစ်ဦး Plex Pass ကိုနှင့်အတူ, တစ်ထောကျပံ့ tuner နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အင်တင်နာ, သင်သည်လည်းအခမဲ့ထုတ်လွှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်, ကြီးမားသောကွန်ရက်များအပါအဝင်. သင်တို့သည်လည်း podcasts များပျော်မွေ့ Plus အား Plex သတင်းများနိုင်ပါတယ် – အများဆုံးမျှမျှတတနှင့်ပြည့်စုံသောကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုကသတင်းစာကျွေးခြင်း. အခမဲ့ Plex ကြိုးစားပါ!
• Magic သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမီဒီယာအားလုံးစုစည်း (ဓာတ်ပုံများ, ဂီတ, ရုပ်ရှင်တွေ, ပြပွဲနှင့်ပင် DVR-ed တီဗီ) ပြီးကောင်းတဲ့အပေါ်မည်သည့် device ကိုမှသူတို့ကို stream, ရိုးရှင်းတဲ့ interface ကို. Plex အပြည့်အဝဖော်ပြချက်ကထပ်ပြောသည်, ဂရပ်ဖစ်, နှင့်အခြားဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်
• podcasts များဒီမှာပါ! သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးရှာရန်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ရည်ညွှန်းမှတဆင့်သစ်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိ. Plus အား: 30-ဒုတိယ Skip, variable ကိုမြန်နှုန်းပြန်ဖွင့်, ပြည့်စုံထောက်လှမ်း, Cross-device ကိုပြန်ဖွင့် status ကိုအဘို့နှင့်အပြည့်အဝ plexestyle ထောက်ခံမှု (On-ကုန်းပတ်အပါအဝင်, ဒါကြောင့်သင်အသီးအသီးစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိချွတ် left ရှိရာအမှတ်ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါတယ်)
•ကျော်ကနေစိတ်ကြိုက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကဗီဒီယိုသတင်း Get 190 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်ဝေသူမိတ်ဖက် (နှင့်ကြီးထွားလာ!), ဖြစ်သော CBS အပါအဝင်, Financial Times, Euronews, ကျော်နှင့်ဒေသခံထိပ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်များ 80% အမေရိကန်စျေးကွက်၏
သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ခု SD ကဒ်အပေါ်တိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းထား•စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဗီဒီယိုများ
•တစ်ဦး Plex Pass ကိုစာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်ပရီမီယံ features တွေခံစားကြည့်ပါ: DVR များနှင့်တိုက်ရိုက်တီဗီ, ကင်မရာအပ်လုဒ်ကို, ပရီမီယံဓာတ်ပုံများ, မိုဘိုင်းထပ်တူပြုခြင်း, မိဘ၏ထိန်းချုပ်မှု, VIP အခွင့်အရေး, နှင့်ပိုပြီး
အချိန်မရွေးသင့်ရဲ့ device များမဆိုအပေါ် Plex အသုံးပြုချင်, ဘယ်နေရာမှာမဆို? https ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု://ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် www.plex.tv/. မှတ်စု: သငျသညျပြီးသားကို Google မှတဆင့် app ကိုဝယ်ယူကြလျှင် Store မှာ Play တစ်ခုသို့မဟုတ် Plex Pass ကိုရှိ, သငျသညျတဖနျမဝယ်ရန်မလိုပါ! သင်၏ယခင်ဝယ်ယူမှုကိုအလိုအလျောက်အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်.
ဒီ app ကိုအချို့သည် features တွေအကျိုးစီးပွား-based ကြော်ငြာကထောက်ပံ့. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအဘို့, Plex ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒကတွေ့မြင်: https://www.plex.tv/about/privacy-legal/#adchoices.
မှတ်စု: ပုဂ္ဂိုလ်များမီဒီယာ streaming Plex မီဒီယာဆာဗာဗားရှင်းတောငျး 1.3.0.0 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား (https ကို AT အလကား://plex.tv/downloads) installed အခြားပစ္စည်းများမှအပြေး. DRM ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး CONTENT, ISO ကို disc image နဲ့ VIDEO_TS FOLDER ကိုမထောက်ပံ့.
: P L ကိုအီး X ကို P ကိုတစ်ဦးက S နဲ့: P R ကိုအီး M ကကျွန်မဦးက M
•အကြိုး Cut! အသုံးပြုမှု Plex တိုက်ရိုက်တီဗီ & ထိုကဲ့သို့သောအား NBC အဖြစ်အခမဲ့ HD HDTV စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ DVR, ABC ရုပ်သံ, တစ်ဦးချင်းစီကိုထောက်ပံ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အင်တင်နာနှင့် tuner နှင့်အတူဖြစ်သော CBS နှင့် FOX
•မိဘထိန်းချုပ်မှုခံစားကြည့်ပါ, ကင်မရာအပ်လုပ်တင်ထားသည်များ, ပရီမီယံဓါတ်ပုံများနှင့်ဂီတ, VIP အခွင့်အရေး, နှင့်ပိုပြီး
R ကိုအီးအက်ဖ်အီးအီးအက်ဖ်အီးတစ်ဦးက T-E ကို R ကို S က
• Remote access ကိုနှင့်ခွဲဝေမှု
•ကျယ်ပြန့်ဖော်ပြချက်, ဂရပ်ဖစ်, ratings နှင့်ပိုပြီး
• Plex ရန်သင့်ကင်မရာကို Roll ထံမှလွှဲပြောင်းဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများနီးပါးသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာမဆိုပလက်ဖောင်းပေါ် apps
• Remote ထိန်းချုပ် Plex သင့်မိုဘိုင်းစက်ကိရိယာနှင့်သင့်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ screen ပေါ်မှာ
•အခြားအ Plex apps များရန်သင့် Plex မီဒီယာဆာဗာပေါ်မှာမဆိုမီဒီယာ streaming ခံစားကြည့်ပါ
>> ကန့်ကွက် <<: မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေပေါ်မှာသင့် Plex စာကြည့်တိုက်ကနေမီဒီယာများ၏ပြသမှုကန့်သတ်ထားခြင်းဖြစ်သည် (ဂီတနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်တစ်မိနစ်, ဓါတ်ပုံပေါ်ရေစာ) app ကို unlocked ဖြစ်ပြီးသည်အထိ. အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုရဖို့, သင် app ကိုဝင်ရောက်ဖို့တစ် Plex Pass ကို -OR သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းအချိန် In-app ကိုဝယ်ယူလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
•အဘယ်သူမျှမဘက်ပေါင်းစုံက Android ကစားသမား? ပြဿနာမရှိပါဘူး! ခုန်-start ဆိုဖိုင် Plex အသုံးပြုခြင်း (ဒေသအလိုက်နှင့်ကွာသည်သင်၏ Plex စာကြည့်တိုက်ကနေ), MKV အပါအဝင်, MP4,, MOV, AVI, WMV, နှင့်ပိုပြီး
• Plex သတင်းများနှင့်အတူနေ့စွဲအထိသိမ်းဆည်းထားပါ: အခမဲ့, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေသခံ featuring ကိုယ်ပိုင်သတင်းအစီအစဉ်ကို, အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာသတင်းရင်းမြစ်များ
•သင့်အကြိုက်ဆုံး podcasts တွေကို Listen – ကြေးပေးသွင်းသို့မဟုတ် server ကိုမလိုအပ်မျှ
စာတန်းထိုးများအတွက်•အပြည့်အဝထောက်ခံမှု, SRT အပါအဝင်, PGS, SSA အား / မြည်းသည်
• (Plex Pass ကို) သင်၏စုဆောင်းမှုမှရုပ်ရှင်ကြော်ငြာများနှင့် extras Add
• (Plex Pass ကို) သင့်မိသားစုများ၏အတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကြိုက်ဖို့မိဘထိန်းချုပ်ရေး Set
• (Plex Pass ကို) အော့ဖ်လိုင်းပြန်ဖွင့်ဘို့အသင့်မိုဘိုင်းစက်ကိရိယာနှင့်ကြိုးမဲ့ Sync ကိုဗီဒီယိုများ
•အားလုံးနီးပါးဂီတဖိုင်တွေ Play, က MP3 အပါအဝင်, M4A, FLAC အ, ALAC နှင့်ပိုပြီး
• (Plex Pass ကို) Plex Mix များနှင့် Mood Mix နှင့်အတူအလိုအလျောက်ရောသမမွှေများ Create
• (Plex Pass ကို) အသိအမှတ်ပြုသီချင်းစာသားကိုပြသ
• (Plex Pass ကို) အော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုဘို့သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာနှင့်အတူကြိုးမဲ့ Sync ကိုဂီတ
ဗားရှင်း: 7.0.4.5618 (704732960)
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာလ 19, 2018
ဖိုင်အရွယ်အစား: 42 mb
Plex က Android .apk များအတွက် Download
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့အားလုံး .apk file တွေကိုမူရင်းနှင့်ပြုပြင်မထားတဲ့များမှာ.
Android အတွက် Plex 7.0.3.5502 .APK ကို
Android အတွက် Plex 7.0.2.5441 .APK ကို
Android အတွက် Plex 7.0.1.5398 .APK ကို
CyberGhost VPN ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ်
အန်းဒရွိုက် .apk ဒေါင်းလုပ်များအတွက် Plex
4shared APK ကိုဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်အခမဲ့ Entertainment က APP ကို
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge APK ကိုဒေါင်းလုပ်
အန်းဒရွိုက် APK ကိုများအတွက် Plex ဒီနေရာတွင် Download
OneDrive Download APK ကို v5.0: android mobile phone ကိုများအတွက်
Android အတွက်အိပ်မက် Dash – APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
UC Browser ကို .apk ဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Zapya APK ကို v5.1 free download, Download – မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
နောက်ဆုံးအင်ပါယာ – War Z: မဟာဗျူဟာ – …
ကောလိပ်ဓာတ်ပုံသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုဓာတ်ပုံ Grid APK ကိုဒေါင်းလုပ်…
Facebook က Lite ကို APK ကို v39.0 ဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး…
စနူကာ APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အခမဲ့အားကစား GAME…
ချိုမြိန်ကင်မရာ – Shelfies စိစစ်မှုများ, အလှအပကင်မရာ…